विनाको बारेमा अचानक यस्तो खबर आएपछि‘‘…? ( भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > विनाको बारेमा अचानक यस्तो खबर आएपछि‘‘…? ( भिडियो हेर्नुस्)
Poonam July 9, 2021 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौ । नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको झपर्दीका जयश्वर सापकोटाकी २१ वर्षीया छोरी विना हराएपछि अहिले परिवार ठूलो समस्यामा परेका बेला बिनाका प्रेमी भनिएका युवक प्रवेश कँडेल समातिएका छन् । असार १८ गते साँझ उनलाई ५ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कँडेलले आफ्नो घर लैजाने भन्दै विनाकै घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबु आमाको सल्लाहमा नै निस्किएका थिए ।
विहिवार अचानक एउटा खबर सार्वजनिक भएपछि विनाका परिवार चिन्तित भए । उनका साथीहरुले यस्तो खबरले परिवारलाई चिन्ता दिलाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सौराहामा श व फेला परेको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको परिवार चिन्तित भएका हुन् । यस्तो अनावश्यक खबर नफैलाउन समेत साथीहरुले भनेका छन् ।
४६ बर्षका यी पुरुषसँगै यी दुई भर्खरका युवती गरे यस्तो अ च म्मको काम
रामकुमारी झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिकी छोरी उषाकिरणको प्रश्नः मेरी आमाको सारीमा प्रश्न उठाउने तपाईं को हो ?